Global Voices teny Malagasy » Taorian’ny Nilazan’Ilay Ministra Indiana Hoe ‘Indraindray Tsara Ny Fanolanana’, Mijoro Ny #MenAgainstRape Ao Pakistana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Jona 2014 2:54 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika Erikah
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Naka ny sary: Philipp Engelhorn
Mora tokoa ve ny manameloka ny fanolanana hita any an-kafa? Ary ahoana raha toa ka mitranga eo amin'ny manodidina antsika izany? Nanomboka nihatazana indray ny tenifototra #MenAgainstRape  ankehitriny ao Pakistana, araka ny tatitra voaray taorian'ny fanambarana mikasika ny fanolanana  nataon'ilay Ministra Indiana, Babulal Gaur, nanao hoe, ‘Indraindray tsara ny fanolanana, ary indraindray ratsy’.
Tovolahy aman-jatony avy any Pakistana no nanatevina an-daharana ny fanentanana nataon'io tenifototra io. Nilaza ihany koa ilay teratany Pakistane mpampiasa Twitter izay mpandika ny teny “baysharam” ho tsy misy henatra, hoe:
Tadidio tsara ilay zazavavy kely dimy taona nisy nanolana tao Lahore tamin'ny herinataona? Mbola mirenireny eny rehetra eny ilay(ireo) mpanolana azy. Mbola eny anivontsika eny. #MenAgainstRape 
Raha vao nivoaka tamin'ny vaovao ilay tantaranà fanolanana nataon'andian-dehilahy tao Delhi tamin'ny taona 2012 , dia nisy bitsika aman-jatony niparitaka erak'i Pakistana nanameloka io tranga feno habibiana io. Ny sasany miresaka momba ny olan'ny fanolanana tao Inde ary ny hafa mifantoka amin'ny fiakaran'ny trangam-panolanana ao amin'ny faritr'i Azia Atsimo. Tena tantara nampivarahontsana izy io izay nisarika ny sain'ireo haino aman-jery maneran-tany nandritry ny herinandro maromaro ary mazava ho azy fa hatreo dia nitombo ny firesahana mikasika ny fanolanana ao Inde.
Nampidirin'ilay Indiana mpitoraka bilaogy, Krshna Prashant, tao amin'ny sanganasany iray somary manesoeso sy miketoketoka ireo tantara miresaka fanolanana :
Niditra avy any izy tamin'ny 11 alina, nivembena. Ny vadiny mbola nanasa vilia am-pilaminana, niha-haingana ny fidoboky ny fony nony henon'ilay vehivavy nihananakaiky azy ny vadiny. Nirotsaka ny ranomasony raha vao nametraka ny tànany teo amin'ny valahany Ralehilahy. Henony amin'ny fofonainy ny toakan-dRalehilahy. Nohesoriny ny akanjon'ilay zazavavy, navelany hilatsaka tamin'ny tany. Aleo mba tsy androany, hoy ny talahon-dRavehivavy. Narary azy ny lamosiny ary toy ny hipoaka ny mihitsy ny lohany.
Norohitin-dRalehilahy ny volony ary natosiny ho any an-trano fandriana izy. Nisarangotra nitady ny akanjony izy raha nandalo ny lalantsara ry zareo. Nivarahontsana ary nivandravandra azy ireo ny zanany lahy. Nidin-dRalehilahy ny varavarana ary nofelahany ny vadiny. Nasainy nangina sy nanala ny akanjony izy. Nanaraka izay nolazainy Ravehivavy.
Ny tinao hambara amin'izany ve dia hoe nanolana ny vadiny ny zanakolahy? Tsy misy an'izany.
Fomba fijery mahafinaritra sy manan-danja manohitra ny herisetra ito, kanefa ny fijerena akaiky ireo bitsika dia mampibaribary ny maro amin'ireo tantara naroson'i Prashant ireo.
Mpankasitraka ny fanolanana (anarana): Ireo olon-drehetra miaro ireo mpanolana NA KOA mahatsapa fa sangisangy mahafinaritra ny fanolanana. #MenAgainstRape 
Ireto manaraka ireto ny sasany amin'ireo tranga ahitana fankasitrahana ny fanolanana avy tao Azia Atsimo:
Manao akanjo manaitaitra ny filàna izy ireo ary misarika ny olona via voaolana no iafaràny. Tsy fanolanana izany fa fikatsahana fahafinaretana amin'ny firaisana ara-nofo.
#MenAgainstRape  fa miangavy anareo hametraka mialoha ny sarinareo miboridana ao amin'ny Whatsapp ~ @CharsiBhangi 
@SameerSiddiki  tokony haolana eny imasom-bahoaka ireo rehetra mpanolana … Ary avelantsika ho velona izy ireo ka ho hitantsika hoe ahoana ny fomba fiainan'izy ireo eto ambonin'ny tany… #MenAgainstRape 
Nyolona sasany nampiasa io tenifototra io hanomezana soso-kevitra hanaovana ny herisetra ara-nofo ho toy ny sazin'ny fanolanana:
Amin'izay fotoana izay ihany aho no mahazaka ny fanolanana! #MenAgainstRape  | izay no tokony hanasaziana ny fanolanana! pic.twitter.com/JG0mrUswTC 
Ary mba manao ahoana moa raha tapahantsika ny bobotany & potehantsika ny bongan'izy ireo!??#MenAgainstRape 
Ny sasany indray manana fomba fijery somary mifangaro.
Tsy hoe rehefa tsy miteny hoe TSIA izy akory… Dia miteny hoe ENY#MenAgainstRape  pic.twitter.com/IwqbwxRxFi 
Rehefa hoe fanolanana dia fanolanana izay ary tsy mila fanazavana. Zavatra mahatsiravina izany ka tokony ho foanana eo amin'ny fiarahamonintsika. #MenAgainstRape 
Tokony handray anjara amin'ity fanentanana ity ny lehilahy tsirairay avy.#MenAgainstRape 
Nanomboka oviana moa no lasa olan'ny lehilahy eto amin'ity tany ity ny akanjo anaovan'ny vehivavy? #MenAgainstRape 
Ny fanolanana no zavatra mahatsiravina indrindra, maharikoriko ary mampihoronkoditra ataon'ny olona. Ny hoe #mankasitraka ny #fanolanana  no faharoa amin'izany #MenAgainstRape  @ThePukaar 
Ny fiampangàna ny olona voaolana ho nisarika ny fanolanana dia mitovy amin'ny fiampangàna ny olona nisy namono ho tompon'andraikitra tamin'ny famonoana azy. #MenAgainstRape 
Raha maro ireo mahatsapa fa dingana iray mankany aloha io fanentanana io satria ny lehilahy no mijoro manohitra ny herisetra, ny hafa kosa manontany tena ny amin'ny fandairan'ny fanentanana ao amin'ny Twitter eo amin'ny trangam-piainana andavanandro. Hanova ny fomba fijerin'ny fiarahamonina ireo niharan'ny fanolànana ve izany? Hampitsahatra ny fanolanana tsy hitranga ve izany? Hanaitra ireo sampana mpampihatra ny lalàna mba hiditra an-tsehatra ve izany? Ampahany amin'ny fanontaniana mipetraka izany. Na mpanohitra an-kitsirano an'ireny fanentanana amin'ny fampahalalam-baovao sosialy ireny ianao na koa mpomba an'izany, dia hita fa varavarankely ahafahana mijery ny toe-tsain'ny tanora sy ny fomba fijeriny momba ny herisetra ara-nofo ireny adihevitra toy ny #menagainstrape  ireny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/06/27/60591/
 fanambarana mikasika ny fanolanana: http://www.theguardian.com/world/2014/jun/05/india-state-minister-rape-crimes-comment
 tantaranà fanolanana nataon'andian-dehilahy tao Delhi tamin'ny taona 2012: http://en.wikipedia.org/wiki/Delhi_gang_rape
 sanganasany iray somary manesoeso sy miketoketoka : https://epiphanyinthecacophony.wordpress.com/2014/04/15/my-son-would-never-rape-a-woman/